Fiangonana FM FOI Sady manabe no miaro ny tontolo iainana
Ankoatra ny maha mpitory ny filazantsara sy maha mpivavaka ny fiangonana FM FOI tarihin’ny Apostoly Benjamina dia manolo-tanana ny fanjakana ihany
hoy ny filoha lefitry ny zanaka am-pielezana ao an-toerana, Charles Rakotonirina. Antony tsy naneken’ny mpiangona ny fanalana ny mpitandrina io. Nametraka ratra ho an’ny mponin’i Lazaina mihitsy ity zava-nitranga tsy mbola nisy efa ho 100 taona mahery nisian’ny fiangonana ity. Manome tsiny ny foibe sy sinaodam-paritany Iarivo Avaradrano izahay satria natao handamina ireo kanefa nanakorontana, hoy izy, ary olona vitsy an’isa indray no nohenoiny. Andrasana ny fivoaran’ny toe-draharaha mikasika ity fiangonana Kristianina ity.